ဥရောပသမိုင်းအပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်၏စာရှုသူများ (သို့မဟုတ်, အကယ်စင်စစ်, သတင်းစာများနှင့်အခြားတော်တော်များများဘာမှမ) တိုတောင်းသောအတိုကောက်သုံးပြီးနှစ်ခုယှဉ်ပြိုင်ချိန်းတွေ့စနစ်များရှိပါတယ်သတိထားမိစေခြင်းငှါ: အအေဒီနှင့်ဘီစီအဆိုပါအီးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဘီစီယခင်နှစ်ခုခွဲဝေတစ်ဘာသာရေးအရလှုံ့ဆော်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် လူ့သမိုင်းမှာအဓိကအချိန်ကာလ, အဆုံးစွန်သောခေတ်မီ non-ဂိုဏ်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။ အမှန်တကယ်တစ်နှစ်သုညဟာခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏အဖြစ်အလေ့အကျင့်ထဲမှာအများကြီးခြားနားအောင်လုပ်ပေးမထားဘူးဒါကြောင့်, နှစ်ဦးစလုံးစနစ်များအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်နှင့်တစ်နှစ်သုညသူတို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဒါကိုကောင်းစွာ engrained ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲရန်မကြိုးပမ်းမှုကာလအစဉ်အမြဲ (အနောက်ပိုင်းကမ်ဘာပျေါတှငျအရာ၌နန်းထိုင်လိုက်ပါတယ် ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအတွက်တဦးတည်းဥပမာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်၏တစ်နှစ်တာအဘို့လက်တင် - - လက်ရှိခေတ်ကိုရည်ညွှန်းဖို့ Gregorian ပြက္ခဒိန်တွင်အသုံးပြုသောအေဒီ Anno Domini တစ်ခုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော 1945 အဖြစ်တစ်ဦးကရက်စွဲကိုအေဒီစာသားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်သခင်အရှင်ဖြစ်ခြင်း, 'ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်၏ 1945th တစ်နှစ်' 'ကိုဆိုလိုသည် သညျယရှေုခရစျသ တဲ့ဘာသာရေးအခြေအနေတွင်ပေးနဲ့ရှင်းလင်းစွာဘီစီအစားအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအစောပိုင်းကခေတ်ကနေအချိန်ကိုကွဲပြားခြားနားသွား။ အေဒီများအသုံးပြုမှုများကခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ် Bede , ဒါပေမယ့် ပို. ပို. အီးနဲ့အစားထိုးနေသည်
ခေတ်သစ်သမိုင်းသုတေသနယရှေုကို 4-7 နှစ်ကအစောပိုင်းကထိုနှစ်တွင် 1 ရက်စွဲထက်မွေးဖွားခဲ့သည်အဖြစ်လက်ရှိအေဒီရက်စွဲ, အမှန်တကယ်မှားယွင်းနေသည်အကြံပြု Gregorian ပြက္ခဒိန် ထဲကနေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့သော်ခေတ်သစ်အသက်အရွယ်အတွက်အေဒီ၏အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျယ်ပြန့်မေ့နေတာလားသို့မဟုတ်နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်အသုံးအနှုန်းရိုးရှင်းစွာဘုံအလွဲသုံးစားလုပ် '' မရဏပြီးနောက် '' အဖြစ်ရှိပါသည်ဘီစီကနေတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခေတ်နေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြနေသည်။ အေဒီခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားမဟုတ်သူသေဆုံးရညျညှနျးအတိုငျး, ဒီတိုးချဲ့လုံးလုံးမှားဖြစ်ပါတယ်။
ဘီစီယေရှုခရစ်ဗဟိုခရစ်ယာန်ကိန်းဂဏန်းများ၏မမွေးခင်ခေတ်ကိုရည်ညွှန်းဖို့ Gregorian ပြက္ခဒိန် (အလှည့်များတွင်အမေရိကန်, ကနေဒါနှင့်ဗြိတိန်အပါအဝင်ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့) တွင်အသုံးပြု, '' ခရစျတျောမဖြစ်မီ '' များအတွက်အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီစီ၏အသုံးပြုမှုကိုရှစ်ရာစုအတွင်း Bede နှင့်အတူအစပြုယုံကြည်ကြသော်လည်း, ကသာခေတ်မီခေတ်အတွက်လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်းသမိုင်းအများစုဟာဟေလသလူနှင့်ရောမရဲ့အကိုပိုမိုကျော်ကြား exploits များစွာ၏ဂန္ထဝင်အသက်အရွယ်အပါအဝင်ဘီစီဖြစ်ပါတယ်။ ပို. ပို. ဘီစီဖြင့်အစားထိုး
အီး '' ခရစ်နှစ် '' များအတွက်အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်, အေဒီ၏အသုံးပြုမှုကိုမှ non-ဘာသာရေးအခြားရွေးချယ်စရာ
အဆိုပါ Gregorian ပြက္ခဒိန်၏ဒုတိယကာလသတ်မှတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိခေတ်။ Anno Domini ( 'ငါတို့သခငျ၏တစ်နှစ်တာ') ကိုအတိုကောက်ဖြစ်သောအနောက်မှာအကြီးအကျယ်အမြစ်တွယ်နေပြီးနှင့် ပို. ပို. ကမ္ဘာကြီးကို '' အေဒီ '' တလွှားလက်ခံ Gregorian စနစ်, တိုးပွားလာရှိလျှင်, ကွဲပြားခြားနားသောသူအများစုပေးထားမသင့်လျော် '' မင်းအဖြစ်ရှုမြင်နေသည်နှင့်အတူ '' ။ သို့သျောလညျး, ခရစ်ယာန်အဖြစ်များသည့်အဘို့အခရစ်ယာန်အစားအားဖြင့်ယေရှုအား၎င်းတို့၏ရည်ညွှန်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြသည်: 'ခရစ်ယာန်ခေတ်' '။
အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လျော့ရဲရဲနဲ့ Non-အကြောင်းအရာအလိုက်အသုံးအနှုန်းများအီးကြောင့်သညျယရှေုနှစ်ပေါင်းများစွာအဆိုပါ 1. အေဒီက start အမှတ်မတိုင်မီမွေးဖွားခံရမှား, မတူပဲအေဒီဖြစ်ခြင်းမအကျိုးအတွက်ရှိပါတယ်။
ဘီစီ '' ခရစ်နှစ်မတိုင်မှီ '' များအတွက်အတိုကောက်သည် Gregorian ပြက္ခဒိန်၏ပထမဆုံးကာလသတ်မှတ်အတွက်ဘီစီ၏အသုံးပြုမှုကိုမှ non-ဘာသာရေးအခြားရွေးချယ်စရာ, စောပိုငျးကာလများနှင့်ရှေးများစွာ၏ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီစီများအတွက်သုညနေ့စွဲဘီစီအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, တကယ်တော့အပေါငျးတို့သရက်စွဲများတူညီရှိနေဆဲ (ဥပမာ 367 ဘီစီ / စီအီး။ )
ဘီစီကံမကောင်းစွာအီး၏မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်, c ကိုနှင့်e၏အထပ်ထပ်ဘီစီမကြာခဏအထူးသဖြင့်လျင်မြန်စွာ scan ဖတ်သူတစ်ဦးဦးအသုံးပြုပုံအီးနှင့်အတူရောထွေးစေနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ဒီအရေးကြီးသနည်း ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးချိန်းတွေ့စနစ်များကိုတူသုညနေ့စွဲကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်ဖို့လွယ်ကူခြင်း, ဒါကြောင့်ဒီအလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အတူတူဖြစ်ရပ်များအတွက်တူညီတဲ့နံပါတ်များရှိသည်, ကောက်ချက်ချ, အဘယ်ကြောင့်မယ့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်အဟောင်းတွေစနစ် (တကယ်တော့ဒီပြောသည်ပါပြီမလုပျ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ ) ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်၏တစ်နှစ် '' ကိုအသုံးပြုပြီးများစွာသောလူမှသည်းခြေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပေါင်းစုံယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျ, ထိုစနစ်သစ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်, လျော့နည်းကန့်သတ်ယူနစ်တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ထင်ဟပ်။
ဒါဟာတစ်နှစ်0င်ရေရှည်၌တူညီသောကျန်ရှိသောကြည့်ဖို့လည်းခက်ပါတယ်, ဤကျနော်တို့ကယ့်ကိုရေရှည်ပြောနေတာဖွင့်တဲ့သမိုင်းကြောင်းက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သကဲ့သို့။
ဂျပန်အမျိုးသမီးများစစ်သည်များ၏တစ်ဦးက Long ကသမိုင်း
Girolamo Savonarola ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Marie Antoinette က "သူတို့ကိုကိတ်မုန့်ကိုစားကြစို့" လို့ပြောသလား?
အဆိုပါရှေး Eraser - အဆိုပါကြေးခေတ် မှစ. အေဒီ 500 မှ
Hadrian - ရောမဧကရာဇ်
ကောလိပ် Life: Coed အိပ်ဆောင်အခန်းကဘာတွေလဲ?
နည်းပညာ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏ဖက်ရှင် Institute က
တရုတ်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာများနှင့် Read ဖို့သင်ယူပါ
ဒံယလေသ Ellsberg ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဟု mama Huhu, "ဒါ-ဒါ; သာမန်" Mandarin အဘိဓါန်တရုတျထဲတွင်
အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဆက်စပ်မှု Conjunction ၏ဥပမာများ
သိပ္ပံများတွင် Air လေကြောင်းလိုင်း၏အဓိပ္ပာယ်
Crimean စစ်ပွဲ: Balaclava ၏တိုက်ပွဲ
, Fatter ကူခြင်း, ကြီး၏ရယူခြင်းအမေရိကန်များ, CDC Says
ကိုယ်ထက် သာ. ကောင်းသောအခြားသူများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ - ဖိလိပ္ပိ 2: 3
Taurus အတွက် Sun က - ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာများ
ဂျာမနီမှာ Anglicism နှင့် Pseudo Anglicism
အရွယ်ရောက်သင်ယူသူငါး ESL စာအုပ်များ